सोनाली बेन्द्रेलाई कुन क्यान्सर भएको छ ?
२०७५ असार २६ मंगलबार ०६:०६:००
बीबीसी । केही दिन अघिबाट ‘इण्डियाजÞ बेस्ट ड्रामेबाज’ नामक रियालिटी शोमा बलिउड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे देखिन छोडे पछि कसैले उनी बिरामीका कारण अनुपस्थित भएको कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् ।
तर तिनै अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे क्यान्सरसँग जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेको समाचा सार्वजनिक भएको छ । उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै लेखिन्, ‘‘हाल गरिएको स्वास्थ्य जाँच पछि मलाई हाईग्रेड मेटास्टेटिस क्यान्सरको संक्रमण भएको थाहा पाएँ । यसको मैले कल्पनासम्म पनि गरेकी थिएन । लगातार हुने दुःखाई पछि मैले आफ्नो जाँच गराउँदा चकित पार्ने रिपोर्ट पाएँ ।’’
हाईग्रेड मेटास्टेटिस क्यान्सर के हो ?
सोनाली बेन्द्रेको उक्त इन्स्टाग्राम पोस्ट पछि सवैमा उनलाई संक्रमित क्यान्सर कुन स्टेजमा र कति खतरा छ भन्ने चाँसो बढेको छ । बीबीसीले पनि यस विषयमा भारतका विभिन्न अन्कोलोजिस्टसँग यसका बारेमा सोधपुछ गरेको छ ।
दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा अन्कोलोजी विभागकी प्रमुख डाक्टर सपना नांगिया क्यान्सरका बारेमा इन्स्टाग्राममा शेयर गरेका कुराहरुबाटै सोनाली बेन्द्रेको क्यान्सर कति खतरनाक छ भन्ने बारेमा अनुमान गर्न सकिने बताउँछिन् ।
मेटास्टेटिस क्यान्सर के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भेनकी छिन्, ‘‘हरेक मेटास्टेटिस क्यान्सरले ज्यानै लिन्छ भन्ने हुन्दैन । कयौं केशमा यस प्रकारको क्यान्सरको उपचार पनि सम्भव हुन्छ ।’’
अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रेको क्यान्सर ‘हाईग्रेड मेटास्टेटिस’ क्यान्स हो । यस कारण पनि हाईग्रेड भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि जानकारी हुन आवश्यक देखिन्छ । डाक्टर सोनालीका अनुसार हाईग्रेडको अर्थ दुई प्रकारका छ्, पहिलो प्राइमरी ओरिजन परिवर्तन भइसकेको र दोस्रो ट्यूमर खालको ।
उपचार के छ ?
सोनालीले इन्स्टाग्राम पोस्टमा आफू अहिले न्युयोर्कमा उपचाररत रहेको बताएकी छिन् । के क्यान्सर स्टेज ४ मा पुगे कस्तो प्रकारको उपचार सम्भव छ ?
डाक्टर आशुतोषका अनुसार क्यान्सरको सवैभनदा राम्रो उपचार भनेको सर्जरी हो । तर तयसका लागि पनि क्यान्सर शरीरको अर्को भागमा संक्रमित नभएको हुन जरुरी छ । सर्जरी केवल स्टेज १ र २ मा मात्रै लाभदायक हुने उनको भनाई छ । डाक्टर आशुतोषले कुनै विशेष परिस्थितिमा स्टेज ३ मा पनि सर्जरी गर्न सकिने बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा हरेक सर्जरीभन्दा अगाडि बिरामीलाई किमोथेरापी पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्टेज ४ का लागि के उपाय छ ?
डा. आशुतोष भन्छन्, ‘‘स्टेज ४ मा रहेको क्यान्सरमा सर्जरी गर्न सकिदैन । यसमा केवल किमोको मात्रै सहारा लिनु पर्ने हुन्छ । यसका साथै विशेष प्रकारको टारगेट थेरापीपनि बिरामीका लागि लाभदायक हुन्छ सक्छ । जसलाई ट्याब्लेट र इन्जेक्शनका माध्यमबाट रगतमा दिनु पर्दछ, यसले क्यान्सर सेल शरीरका अन्य भागमा पुग्न पाउँदैनन् ।’’